बुध ग्रहले घर परिवर्तन गर्दैछ, यी राशि भएका व्यक्तिलाई फाइदै फाइदा ! Weekly Nepal
काठमाडौं। असोज ११ गते बुधबारको मध्यरात १२ः५७ बजे बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दै छ । यो पटक यो ग्रह कन्या राशिमा प्रवेश गर्दै छ भने २८ असोजसम्म त्यहाँ रहने छ । त्यसपछि यो ग्रह तुला राशिमा जाने छ । तर यो ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दाको प्रभाव कस्तो रहला ?
बुध राशिको घर पतिर्वन गरेर कन्या राशिमा नै आउने भएकाले यो राशि व्यक्तिका लागि भने अत्यन्तै शुभ रहने छ । तपाईको धर्म भावमा बुधको उपस्थिति रहने छ । भगवान विष्णुको उपासना गर्दा लाभ प्राप्त हुने ।